taariikhda Development - Xizi wiishka Co., Ltd
XIZI weeraryahanka xanbaarsan Soocay ee fikradda horumarinta wiishka of a boqol oo sano, dhaxlay waayo aragnimo iyo farsamooyinka of warshadaha wiishka ka badan 30 sano, ulo si ay u hal-abuurnimo ku ool ah iyo mar walba ku adkaysatay dabeecad u gaar ah, ku takhasusay oo concentrative horumarinta ganacsiga.
Muddo sanado ah, wakhti kasta oo ka mid ah isgacan daacad ah la macaamilka, mar kasta oo iskaashi dhow la leh macaamiisha .... waa maragga of XIZI ayaa horay dhan. Waxaa si hufan waa sababta oo dhoola dhabta ah ee mar kasta, XIZI ayaa si deg deg ah xaqiiqsadeen in bartilmaameed u ah labanlaabo masraxa caalamiga ah suuqa guryaha.
Ururinta talanti sare on hawlgalka ganacsiga iyo maamulka, heerka koowaad talanti marketing dhafan xirfad, cilmi-soo saarka iyo horumarinta talanti awood badan iyo sidoo kale technology iyo dhismaha talanti khibrad leh, kooxda XIZI kalsooni oo dhan ku soo dejin qoslayay Aamin adduunka.
In 2016, si guul bilaabay alaabooyin kala duwan oo cusub, oo ay ku jiraan nooca disc motor aalladda khafiif ah iyo Victor MRL (T) wiishka la qolka mishiinka, XEC-6000 control-drive dhafan escalator ammaan ah.
In 2015, XIZI Industrial Park iftiimay in industry ee, abaal horyaalka ee ugu sareeya-100 ganacsi ee gobolka Zhejiang.
In 1997, XIZI Otis wiishka Co., Ltd. waxaa si rasmi ah la aasaasay.
In 1996, "XIZI" booday in No. 1 brand qaranka ee suuqa guryaha.
In 1993, XIZI dhoofiyo waxaa wiishka first to Vietnam.
In 1981, XIZI wiishka waxaa si rasmi ah la aasaasay.